Ny rivotra amin'ny trano fandraisam-bahiny dia mbola mety hahafaty aorian'ny fanadiovana lalina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny rivotra amin'ny trano fandraisam-bahiny dia mbola mety hahafaty aorian'ny fanadiovana lalina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Resorts • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Namaky 15 aho
Vonona ny hisokatra indray i Marriott, Hyatt, IHG, Hilton, Wyndham, trano fivahinianana Corinto ary Resorts aorian'ny hidinan'ny COVID-19. Narary efa nosokafana indray. Matokia ahy, hoy ny fitantanana raha resaka filaminana, faharetana ary fahadiovana no resahina. Mbola mety hahafaty ve ny rivotra iainantsika?
Marriott, Hyatt, IHG, Hilton, Wyndham, trano fandraisam-bahiny sy hotely any Korinto mahazo vonona hisokatra indray na efa manokatra ny sasany amin'ny fananany amin'ny vanim-potoana ara-dalàna vaovao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny rivotra iainana amin'ny trano fandraisam-bahiny toy izany, amin'ny metro, any amin'ny toeram-pivarotana dia mety hahafaty hatrany, ary asehon'ity lahatsoratra ity ny fomba.
Elinor Garely dia mpanoratra monina any New York Manhattan eTurboNews, Divay.travel, ary manam-pahaizana amin'ny fiarovana hotely sy fialan-tsasatra. Araka ny fikarohana sy ny heviny dia mizara ity OP-ED ity izy:
Rehefa mandehandeha mamaky gazety aho izay tohanan'ny hotely eto an-toerana sy any ivelany dia mampahafantatra ahy fa novainy ho toeram-pialofana azo antoka izy ireo, miaraka amin'ny toerana madio (ary mamela ahy ho diso tafahoatra) afaka miala sasatra izahay ary tsy manahy momba ny areti-mandringana sy ny areti-mifindra, “Matokia anay!”
Kudos ho an'ny hotely amin'ny farany “fanadiovana lalina”Fananana izay tsy nanana fomba fiasa matotra momba ny fidiovana hotely hatramin'ny nisokafany, ny fitsidihana farany nataon'ny CEO, ary / na ny mpampiasa vola lehibe. Farany - esorina ny karipetra maloto / voaloto / bobongolo (tsy tokony ho nampiasaina tamin'ny voalohany), ny vovoka sy ny habakabaka an-taonany izay nipetraka tao anaty lambam-baravarankely sy teo am-baravarankely dia lasa ampahany tamin'ny tantara ihany; volomaso / maimbo fonosana fandriana ary ondana matanjaka be no atsipy, raha soloina solika kosa ny solomaso rano ao amin'ny fandroana, ny fibaikoana ny fahitalavitra dia ao amin'ny rindrambaiko findainao, ary, ao anatin'ny fotoana vitsivitsy, ny fidirana / fivoahana dia fehezin'ny alàlan'ny finday avo lenta na ny fanekena ny tarehy. ary ny bokotra ascenseur dia nosoloina dian-tongotra amin'ny fivarotana lehibe any Thailand, “… azo antoka kokoa ho an'ireo mpiantsena ny tsy hahavoa azy” hoy i Prote Sosothikul, filoha lefitry ny Seacon Development Company Limited.
Ny fampahalalam-baovao dia manome toky ahy fa voadio ireo vavahady (isaky ny ora vitsy dia tsy mahatsiaro tena ho voaro isika), ampinga eo amin'ny desk eo anoloana no mampisaraka ahy amin'ny mpiasa (saingy tsy manome toky ahy izy ireo fa salama izy ireo ary hijanona ho toy izany mandritra ny fiainako manontolo. mitsidika); ny menus dia nosoloina elektronika (azafady avelao aho hiditra ao amin'ny findainao ny menio) ary ny mpiasa miandry dia misaron-tava (soloina isan'ora / isan'andro / isan-kerinandro? Iza no mahalala!)? Matetika aho no matoky fa ny fananana dia manaraka ny Center for Disease Control (CDC), na torolàlana momba ny maso ivoho iraisam-pirenena hafa ary amin'izay dia afaka miala sasatra sy mankafy ny fitsidihako aho, tsy misy mikraoba (na ahena kokoa ny mikraoba).
Marina! Matoky anao ve?
Maninona no misy ny finoana eo amin'ireo mpitantana ny hôtely fa tokony hatoky ireo làlan-kaleha navoakan'ny governemanta na orinasa tsy miankina aho izay mbola mampikorontana ahy foana; rahateo, tsy nisy ny masoivohom-panjakana na ny orinasam-panjakana nahazo ny antso tsara hatramin'ny nanombohan'ny krizy (raha nisy izy ireo dia tsy nahazo areti-mandringana isika).
Nanapa-kevitra ny hanafina tsiambaratelo i Sina (mandra-pahatongan'izy ireo tsy afaka), nanapa-kevitra ny OMS fa hanafina ny tsiambaratelo ho an'ny Sinoa (mandra-pahatongan'izy ireo tsy afaka), ny lehiben'ny governemanta ho an'i Italia, France, Etazonia, ary isaky ny firenena hafa… tsy tratra (na tsy raharahina) daholo ireo fambara mety hamonjy olona an-tapitrisany amin'ny aretina sy / na fahafatesana. Mampiroborobo zava-mahadomelina tsy mahomby (na mampidi-doza) ireo orinasa mpamokatra fanafody, raha mivarotra sarontava tsy misy kilema kosa ireo orinasa misaron-tava amin'ny mpiasan'ny fahasalamana voalohany. Ka raha miteny amiko ny hotely hotely fa manaraka ny torolàlana avy amin'ny governemanta izy ireo, azafady rehefa tsy mazoto aho ary manao famandrihana haingana.
Ho fanampin'izay, ny dokotera, ny mpahay siansa ary ny mpitantana orinasa nitafa (miverimberina) tamin'ny fahitalavitra ary nanentsina ny boaty fampidirana ahy tamin'ny bilaogin'izy ireo dia toa tsy misy dikany toa ny olon-drehetra. Manombatombana izy ireo, manova ny heviny isan'ora, ary liana indrindra amin'ny fametahana ny bokin'izy ireo ankehitriny na mitady vola fanampiny ho an'ny fikarohana vinavinany.
Beyond Foggy, Spray, Wiping: HVAC sy UV
Miaraka amin'ny fanodinkodinana sy famafazana ary fampiasana zavatra simika isaky ny santimetatra amin'ny velaran'ny hotely (farafaharatsiny izay hitan'ny vahininy), ny singa lehibe amin'ny rafitry ny hotely dia mbola tsy noresahina (na tsy noraharahaina): ny rafi-pahazavana HVAC sy UV .
Ao amin'ny rivotra
Azontsika atao ny miady hevitra raha miaina amin'ny sehatra mandritra ny minitra / ora / andro ny Coronavirus; na izany aza, ny tsy azo iadian-kevitra dia ny fisian'ilay bibikely. Ny fanaparitahana ny pathogen amin'ny alàlan'ny rivotra dia mitranga amin'ny alàlan'ny rano mitete sy aerosol izay matetika ateraky ny kohaka, sneeze, hiakiaka, fihirana, fifohana rivotra, firesahana, fikosehana amin'ny fidiovana, na fomba fitsaboana.
Ny ankamaroan'ireo rano mitete lehibe kokoa dia latsaka amin'ny tany (gravitasi) ary midina ao anatin'ny 3-7 metatra amin'ilay loharano voalohany. Ny fihenan'ny rivotra sy ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry dia TSY misy fiantraikany amin'ny famindrana lavitra. Na izany aza, ny aerosol manidina kely kokoa, ao anatin'izany ny vovo-dronono mitete avy amin'ny tontolo maina dia mety hisy fiatraikany amin'ny làlam-pivoahana amin'ny habakabaka amin'ny ankapobeny sy ny fantsom-panafody manodidina ny loharano. Ny aerosol kely dia afaka mijanona anaty rivotra sy mifindra mandritra ny fotoana maharitra (minitra / ora / andro) ary mandeha lavitra kokoa rehefa mitondra otrikaretina mpampiantrano faharoa, izay tsy nifandray tamin'ny mpampiantrano voalohany.
Fianarana vao haingana (Porofo amin'ny fandefasana aerosol azo avy amin'ny SARS-CoV-2 ao amin'ny trano fisakafoanana tsy dia misy rivotra) manasongadina ny zava-misy fa ny toeram-pisakafoanana any Guangzhou dia nanana rafi-drivotra ratsy ary raha ny marina dia 10 heny ambany noho ny tahan'ny rivotra navoakan'ny ankamaroan'ny manampahefana sy ny fikambanana matihanina.
Ny fandinihana ihany koa dia miresaka momba ny Ventilation Systems izay loharano lehibe manadio ny tontolo anaty trano avy amin'ny loto, anisan'izany ny viriosy, noho ny fahafahany mamoaka rivotra anaty ary mampiditra rivotra voasivana avy amin'ny tontolo ivelany. Raha ny tena izy, raha vao miditra amin'ny tranobe ny olona iray SARS-CoV-2, ny fomba tokana hampihenana ny fahafahan'ny aretina ho an'ny hafa dia FANADIOVANA ny rivotra anaty anaty amin'ny alàlan'ny rafi-panafody.
Ny maha-zava-dehibe ny rafitra fanamafisam-peo, fanafanana ary rivotra dia tsy tokony hatao ambanin-javatra (na dia manana) amin'ny fifehezana ny fihanaky ny Coronavirus aza. Ny hafainganam-pandehan'ny fiparitahan'ny areti-mandringana dia mampiseho ny mety hisian'ny aretina amin'ny toerana voafetra ampahibemaso ary tsy tokony hodian-tsy hita. Ny fifindran'ny AIRBORNE ny viriosy dia heverina fa ny lehibe indrindra ary ny fanadihadiana dia mampiseho fa afaka miparitaka amin'ny alàlan'ny olona iray manainga fotsiny. Ny fandinihana dia mampiseho koa fa ny rivotra tsy ampy dia mety hampitombo ny fahafahan'ny fifindrana. Tsy ilaina intsony izany; maika dia maika fa ny trano fandraisam-bahiny rehetra dia miantoka ny vahininy sy ny mpiasa ao aminy fa nampiditra izy ireo ary nametaka rivotra madio mba hampihena ny risika amin'ny aretina.
Asehon'ny fandinihana ihany koa fa raha avo kokoa ny tahan'ny rivotra isaky ny adiny ao anaty efitrano iray dia mampihena ny fahafahan'ny otrikaretina ho an'ireo mipetraka ao. Raha vantany vao miditra ao amin'ny toerana voafetra ho an'ny daholobe ny mpitsangatsangana asymptomatika, dia avo lenta ny aretina mety hitranga amin'ny olona hafa raha tsy misy rivotra miditra ao amin'ilay trano na tsy misy rivotra mihitsy.
Fifanakalozana rivotra madio
Ny profesora Francesco Le Foche, mpitsabo aretin-tsaina any Policlinico Umberto I any Roma, dia nanapa-kevitra fa “ny rafi-panafody voarafitra tsara, izay afaka miantoka ny fifanakalozana rivotra amin'ny toerana anatiny, dia tena afaka manampy amin'ny fampihenana ny fihanaky ny viriosy… .ny ny fampidirana ny rivotra madio sy ny fitrandrahana ny rivotra reraka miaraka dia asa atolotra. Manampy amin'ny fanadiovana ny rivotra anaty izy io, noho izany mampihena ny mety ho fiparitahan'ny olona ao amina trano. "
Ny rafi-pitobiana dia tokony hampiasaina hanadiovana ny tontolon'ny rivotra anaty trano, noho izany dia ilaina ny manivana ny rivotra ivelany mba tsy hitondra loto ao anaty habakabaka anatiny. Ny rafi-drivotra dia tokony hampiasaina hampihenana ny mety hisian'ny areti-mifindra eo amin'ny mponin'ny trano.
Irradiation Germicidal Ultraviolet (UVGI)
UVGI dia ampiasaina hamonoana na hanafoanana ireo zavamiaina bitika ary azo ampiasaina amin'ny trano fandraisam-bahiny ho lalana miaro iray hafa. UVGI dia afaka manafoana ireo sombina virus ao amin'ny sivana HVAC ary napetraka ao amin'ny efi-trano ambony. Ny fahombiazan'ny taratra ultraviolet dia miankina amin'ny hamafin'ny hazavana sy ny vanim-potoana nanehoan'ny pathogen nomena ny mazava. ASHAE, ny fikambanana manerantany izay mamoaka fenitra sy torolàlana ho an'ny HVAC, dia manoro hevitra ny UVGI; na izany aza, voafetra ny fangatahana any Etazonia noho ny vidiny sy ny filàna fametrahana matihanina ary mila fikojakojana fanampiny mitohy.
Morphed avy amin'ny Hotely mankany HealthCare mankany amin'ny Hotely
Raha trano fandraisam-bahiny no nampiasaina vonjimaika ho toy ny tobim-pahasalamana, ny rafitra HVAC ary koa ny trano iray manontolo dia tokony handeha amin'ny fotoana mitokana na quarantine mitovy amin'ny vanim-potoana quarantine olombelona araka ny tolo-kevitry ny CDC, WHO, departemantan'ny fahasalamana eo an-toerana, fanjakana ary federaly ary fikambanana fitsaboana sy fitsaboana hafa miaraka amin'ny angon-drakitra mba hamaritana ny androm-piainan'ny viriosy mety velona amin'ny habakabaka sy amin'ny rivotra.
Dennis Knight, PE, FASHRAE, talen-tsekoly / injeniera ao amin'ny Whole Building Systems any Charleston, South Carolina dia nanoro hevitra fa mandritra ny fotoana hanidiana ny trano dia tokony hasaina ny rafitra HVAC toy ny hoe misy ambaratonga onenana sy hafanana ary hamandoana ara-dalàna. Ho fanampin'izany, ny faritra rehetra amin'ny rafitra dia tokony hojerena, diovina, ary hojerena, "… farito ny fahafahan'ny rafitra mitazona ny rafi-pitantanana ny rivotra amin'ny alàlan'ny rivotra, ny tahan'ny rivotra, ny mari-pana sy ny hamandoana ilaina… mba hitazomana ny hafanana, ny hamandoana ary kalitaon'ny rivotra anaty. " Nanoro hevitra ihany koa izy fa "… ny faritra be fikitika dia tokony hozimbazimbaina miaraka amin'ny vahaolana fanadiovana ankasitrahana sy famonoana otrikaretina", ary "asio fitaovana fizarana rivotra (famatsiana, famerenam-bidy ary famafana rivotra) manerana ny fotodrafitrasa".
Mihidy vonjimaika. Misokatra izao
Raha tsy niasa mihitsy ny trano fandraisam-bahiny (nilaozana saika) dia mety niharatsy ny rafitra HVAC. Azo heverina fa ny famatsian-jiro sy ny bateria dia nihena ary mety tsy hahomby; ny sensor, ao anatin'izany ireo mpitsikilo setroka, dia mety hosaronan'ny vovoka; Ny fambolena biolojika dia mety hitranga amin'ny tilikambo mangatsiaka, lapoaly, rafitra rano an-trano mijanona, ary rafitra fanamainana sy rano mangatsiaka… mety hisy koa ny media sivana maloto sy voaloto.
Elevator sy efitrano fitsaharana ho an'ny daholobe
Inona no iraisan'izy ireo? Tsy fahampian'ny rivotra. Ny habaka anatiny misy rivotra ambany dia ny lovia Petri ho an'ny COVID 19. Ny fandinihana iray avy amin'ny National Institute of Infectious Diseases (Japan), dia nahatsikaritra fa "ny mety ho tranga voalohany nampita COVID 19 tao anaty toerana mihidy dia 18.7 heny noho ny habakabaka malalaka tontolo iainana. "
Ny aerosolization ny poti-javatra avy amin'ny flush ao an-trano fidiovana koa dia manaparitaka COVID 19 areti-mifindra amin'ny alàlan'ny fandefasana ireo mikraoba mifindra amin'ny rivotra ary mijanona mandritra ny minitra vitsy izy ireo (raha tsy maharitra intsony).
Voafetra ny porofo momba ny viriosy miely amin'ny rano; na izany aza, maro ny kamory no mikatona satria ny viriosy, mety tsy hiparitaka amin'ny rano, dia mety hiparitaka rehefa misy olona mandrora rano am-bava ao anaty pisinina, ka tratran'ny olona akaiky rehefa tsy misy rano ny loha (izany hoe vondrona miresaka na ankizy milalao eo akaiky eo). Na ny olona mihiaka amin'ny pisinina be olona aza dia afaka manaparitaka ilay viriosy ao anaty rano sy / na ny mpilomano. Ho fanampin'izany, noho ny fahateren'ny fivezivezena, matetika no voakitika ny sehatra (izany hoe ny lalantsara amin'ny tohatra sy ny varavarana fidirana / fidirana). Ny elanelana ara-tsosialy amin'ny pisinina dia sarotra ihany koa, raha tsy azo atao izany. Ny faritra hafa misy ny areti-mifindra dia mety misy ny trano fidiovana, tsipika fisakafoana, faritra anaty alokaloka, sns.
NY Public Transit
Ny orinasam-pifamoivoizana dia nino fa ny rafitra ambanin'ny tany NY dia diovina isan-kariva amin'ny fikasana hitazomana ny mpiasa tsy harary mandritra ny fotoana maharitra. Na izany aza, ny tatitra dia nanondro fa ny filazan'ny Goldshield 75 izay vokatra antimicrobial ary atolotra hanohitra ny Covid-19 dia mety tsy marina. Efatra taona lasa izay, ny orinasa dia nandamina fitarainana napetraky ny US Protection Protection Agency (EPA) milaza fa nanao fanambarana diso momba ny fahombiazan'ny famafazana. Ny vokatra Goldshield mampiahiahy dia ampiasaina amin'ny metro ambanin'ny tany MTA, fiantsonan'ny metro, toerana fitobiana ary hatramin'ny farany manerana ny rafitra fitaterana NYC manontolo. Mandeha ve ny fizotrany? Na dia tsy nahita antontan'isa momba ny fahombiazan'ny fizotran'ny fanadiovana aza aho dia mahaliana (ary mampalahelo) ny manamarika fa hatramin'ny 29 aprily 2020, nitatitra i Jessica Easthope fa efa ho 2000 ny mpiasan'ny MTA no nifandray tamin'ny Coronavirus ary efa ho 100 no maty ( https://netny.tv).
Mihazona ny fofoninao?
Ny fikarohana dia mahita fa ny Covid-19 dia miparitaka, voalohany indrindra, amin'ny alàlan'ny tsiranoka tsiranoka latsaky ny 0.0002 santimetatra (5 microns) ny savaivony ary fantatra amin'ny hoe aerosol. Ireo ranoka ireo dia avoaka rehefa miteny ny olona, ​​ary "… afaka mijanona mandritra ny fotoana maharitra", hoy i Jeffrey Shaman, epidemiolojista ary lehiben'ny fandaharan'asa momba ny toetrandro sy fahasalamana ao amin'ny University of Columbia, NYC.
Ny fandinihana iray tao amin'ny New England Journal of Medicine (martsa 2020) dia nanapa-kevitra fa ny sombin-tsiranoka voan'ny aerosolized dia afaka mijanona mandritra ny telo ora eny amin'ny habakabaka, ary noho izany dia mety hamindra olona iray aorian'ny famoahana azy. Ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2009 tao amin'ny Journal of Aerosol Science dia nahatsikaritra fa ny sakany sy ny kabary dia miteraka aerosol; na izany aza, ny kabary dia mety hiteraka aerosol 10 heny mihoatra ny miaina irery.
Raha tsy misy ary mandra-pisian'ny fikarohana fanampiny momba ny Covid-19, ary ny mpanao politika eto an-tany dia mandrisika sy manohana ny ezaka hitadiavana valiny amin'ireo fanontaniana ary amin'ny farany hampihena na hamarana ny areti-mandringana, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny fanaovana sarontava, mijanona 6- 10 metatra miala ny olona rehetra, sasao ny tanantsika (mihevitra, mazava ho azy, fa mora ny misy rano madio), ampiasao mpanadio tanana sy olom-boafidy ho ao amin'ny governemanta mahay mamaky, manoratra ary mieritreritra ny lalan'izy ireo mankany amin'ny fiarahamonina tsaratsara kokoa sy salama kokoa.
Fifandraisana haingam-pandeha na aiza na aiza any Canada, UK ...